Cawil Miyaanu Halba Seegin? – Wargeyska Saxafi
Maqaalo, Waxbarashadda & Tacliinta
Nasiib-wanaag waxa aan jaanis u helay in aan akhristo Buugga “RAAD- RAACA TAARIIKH SOOMAALIYEED” ee uu qoray Ambassador Xuseen Cali Ducaale “Cawil”. Buuggani maaha buuggii ugu horeeyay ee uu Cawil qoray bal se, waa kii ugu horeeyay ee aan ka akhristo buugaagtiisa. Inkasta oo aanu buuggani dhalliil la’ayn, oo aan qaar dhalliilihiisa ka mid ah idinla wadaagi doono, haddana waxa aan jecelahay, ugu horayn, in aan si kal iyo laab ah uga mahad-celiyo qoraaga buugga waa Cawile iyo intii kale ee gacan ka gaysatay dhamaystirkiisaba.
Si la mid ah sida buugaagta kale ee aan akhristo, buuggani waxa uu igu dhaliyay su’aalo badan. Su’aalahaas uu buuggu igu dhaliyay oo igu soo noqnoqday awgeed iyo waliba waxa uu buuggu ka hadlayo oo ah wax aan wada-leenahay waa taariikhda e, ayaa waxa ay igu dhaliyeen in aan qoraalkan idinla wadaago. Sida magaca buuggaba ka muuqata, buuggu waxa ay ahayd in uu ka waramo taariikh Soomaaliyeed laakiin taa bedalkeeda qoraagu waxa uu kaga sheekeeyay taariikhdiisii iyo waxqabadkiisii. Nassib-darro inta uu taariikhda Soomaalida ka sheegayna waxa ay noqotay in bilaa tix-raac ah.
Akhriste, waxa aan kugula talin lahaa in aad akhrido buuggan sababtoo ah waxa suura-gal ah in aad u fahanto si ka duwan sida aan anigu u fahmay. Ceebna maaha in la kala fikir duwanaadaa. Kala fikir duwanaanshaha ay dadku ku kala fikir duwanaadaa hal shay oo isku mid ah wax ka dhasha is-fahan iyo in uu qofba qofga kale wax ku biiriyo waana hab ka mid ah hababka badan ee xaqiiqda loogu dhawaado. Sida aan hore u sheegay aniga buuggu waxa uu igu dhaliyay su’aalo badan. Su’aasha markiiba i saaqday ee ilaa inta aan buugga dhamaynayay igu soo noqnoqonaysay waxa ay ahayd, tollaw miyaanay Cawil halba seegin? Sabobtuna wax kale maaha ee waxa uu Cawil aad ugu dheeraaaday ka sheekaynta guulihiisii iyo waxqabadkiisii. Cawil, casharka inooguma darin, habayaraatee, wixii uu seegay ee caqli, cilmi iyo itaal gaadhsiin waayay. Waxa kale oo aan is-waydiiyay sabobta uu qoraagu inoola wadaagi waayay habka iyo hanaanka uu ku ogaaday sheekooyinka tirabeelka ah ee aanu isagu goob-jooge ka ahayn? Tix raac-la’aanta sheekooyinka aanu goob-jooga u ahayni waxa ay su’aal galinaysaa ku kalsoonaanta xogta uu isagu u taagnaa.
Haddaba inta aanan u galin falanqaynta buugga iyo wixii igu dhaliyay su’aalaha aan kor ku xusay aan wax yar idiinka sheego buugga. Buuggu waxa uu ka koobanyahay sagaal cutub. Cutubka koowaad oo hordhaca ah marka laga reebo waxa uu qoraagu ku bilaabay cutubka labaad oo uu kaga waramay carruurnimadiisii iyo laba magaalo oo xasuus gaar ah ku leh. Cutubka saddexaad iyo afraad waxa uu kaga waramay, sida uu u dhigay, taariikhdii Soomaaliya laga soo bilaabo xornimadii 1960 kii iyo isku-biirkii Soomaaliya iyo Soomaaliland ilaa iyo dhamaadkii dawladdii milateriga ahayd ee Mohamed Siyaad Barre. Cutubka shanaad waxa uu qoraagu kaga hadlayaa dib-u-dhalashadii Soomaalilaand, duruufihii adkaa ee ay soo martay iyo qaar ka mia ah dagaaladii sokeeye, shirarkii dib-u-heshiisiineed ee la qabtay iyo waliba xukuumaddihii Somaliland ee kala danbeeyay. Cutubada lixaad, toddobaad iyo sideedaadna waxa uu kaga waramayaa saddex waddan oo aan jaar nahay iyo madaxdoodii halka cutubka sagaalaad uguna danbeeyana uu qoraagu kaga hadlay xal-u-helida Soomaaliya.
Waxa kale oo uu Cawil ka sheekeeyay intii inqilaabku socday in uu ku dhiiraday arrin ay cid kale ku dhici wayday. Sida uu Cawil buugga ku sheegay waxa jiray hal sarkaal oo ciidan badan ku haystay magaalada Cadaadlay isla markaana inqilaabka ka soo horjeeday. Sarkaalkaa iyo ciidankiisuba waxa ay caqabad ku ahaayeen habsami-u-socodka iyo guusha ama guul-darada inqilaabka. Waxa lagama-maarmaan-noqotay in cid loo diro sarkaalka oo ay hore isugu dheceen hawl wadeenada inqilaabka. Haddaba Cawil isga oo ka sheekaynaya cidii loo diray iyo sida ay ku timi waxa uu yiri:
“Saraakiishii way ka maageen in ay is-miidaamiyaan, oo ay sarkaalkaasi xeradiisa tagaan. Markii aamuskii dheeraaday ayaan soo jeediyay in aan anigu diyaar u ahay in aan waajaho sarkaalkaasi oo dhibaato badan aanu u tirineyno, welina aan naga hadhin anaga oo si kasta u barinay. ……….. Dhinaca Cadaadley ayaan u kacay. Waxaan sii kaxaystay sarkaal ay aad isugu dhawaayeen sarkaalkan naga soo horjeeda si ay kalsooni ugu abuurto in aan wax dhibaato ah loo wadin.
5-tii subaxnimo ayaanu xeradii galnay. Askartii irridda joogtay ayaa na joojisay. Markii aanu isu sheegnay ayey na sii daayeen. Irrida waxa ku samaysnaa qol loo yaqaan “Guard-room” oo xerada laga ilaaliyo, kaas oo uu fadhiisto marba saddex-Aliflaha madaxda u ah askarta ilaalinaysa xerada. Saddex-aliflihii ayaan ku amray in uu bigilka ciidanka loogu yeedho afuufo. Waxan marnaba maskaxdayda ka bixin sidii ay ciidankaasi u tabobarnaayeen. Muddo aan ka badnayn toban daqiiqo ayey askartii oo hubkoodii u dhan-yahay isa soo tubeen xafiiskii ilaalada hortiisa.
Khudbad ayaan halkaasi uga jeediyey. Waxa aan ku idhi “Waxaan idiin sheegayaa in Saacaddan laga bilaabo taliyo-nimadii ciidanka laga wareejiyey taliyihii hore, xilkana aniga la ii magacaabay, sarkaalkan i barbar taagana loo magacaabay taliye-ku-xigeen. Imikana waa fasaxan tihiin. Askari walba shaqadiisa ha qabsado” (Cawil, 2016 p: 60-61) Waxa uu qoraagu intaa raaciyay in uu sargaalka xerada haystay soo istaagay inta aanu khudbadii dhamayn oo uu haddana gurigiisa ku noqday isaga oo waa sargaalka e, aan habayaraatee waxba ku darsan.
Halkan qoraagu waxa uu sheegay in uu muujiyay geesinimo aanay muujin saraakiishii kale ee ay inqilaabka ku wada jireen. Waxa se cajiib ah in aanu mar qudha sheegin magaca sarkaalka uu sii kaxaystay ee ay xerada wada tageen. Waxa kale oo xusid mudan in uu sida qoraalka ku cad isagu waa Cawile waajahay khatarta ku jirtay in la aado xero ciidan oo waaliba taliyohoogu ogyahay isla markaana ka soo horjeedo inqilaabka. Waxa uu qoraagu yidhi mar uu ka hadlayay taliyaha xerada iyo sida ay khatar u tahay in loo tagaa “dhibtu waxay noqotay ayaa ugu tegi kara xeradiisa, waayo qofkii ugu tega awood ayuu u leeyahay in uu toogto amaba xidho” (Cawil, 26016 p: 60). Ugu danbayn waxa uu Cawil sheegay in inqilaabkii fashilmay isaga oo wali Cadaadley jooga waxana uu yidhi “La-yaab ayay igu noqotay markii aan raadiyawga isgaadhsiinta ka maqlay Kornayl Caynaanshe oo amarro bixinaya. Markiiba waan gartay in saraakiishii aanu qaadi waynay xoog lagu furtay inqilaabkiina uu sidaas ku fashilmay. Niyad-jab weynaa! In yar kadibna waxaba ii yimid oo I qabtay ciidankii aan la wareegay ee Cadaadley” (Cawil, 2016 p 64). Halkan waxa guusha iyo geesinimada Cawil qalin-daaray laba arrimood. 1) Sababta uu Cawil u sheegi waayay magaca sarkaalka raacay ee khatarta u badheedhay si la mid ah sida uu isaguba ugu badheeday. 2) Warka uu Cabdilaahi Aadan (Koongo) sheegay ee ah in uu Cawil baxsaday oo laga soo qabtay meel Jabbuuti u dhaw. Koongo waxa uu yidhi“waxa kale ee aan la isla ogayn, markii Cawil iyo Lugooyo iyo guruubkani ay Berbera qabsadeen ayuun bay mar qudha Jabbuuti u baxsaden” (Koongo, 2016: Waraysi uu siiyay HCTV) Waxa kale oo uu Koongo isla warysigaa ku sheegay in Cawil, Lugooyo iyo guruub kale laga soo qabqabtay meel Jabbuuti u dhaw.
Cawil iyo Dawladdii Milateriga ahayd
Si la mid ah sidii hore, waxa uu Cawil ka sheekeeyay shaqo iyo nolol bilaa turxaan ah oo guul mooyee aan guul-darroba lahayn. Waxa ka mid ah waxyaabaha uu qoraagu inla wadaagay intii uu Maxamed Siyaad Barre la shaqaynayay ilaa sagaal kulan oo uu la yeeshay iyo kulan walba wixii ay ka wada hadleen, Shaqooyinkiisii Uganda iyo Kiinya iyo sida aanu midhba u seegin ee uu wax walba u wanaajiyay. Waxa kale oo uu qoraagu sheegay in uu waxtar badan u lahaa dadka, gaal iyo islaamba, isaga oo sida uu sheegay dad badan xadhig ka bebaadiyay halka qaar kalena uu dil ka badbaadiyay sidaCabdilahi Yusuf. Kulamada uu Cawil madaxwayne Siyaad la yeeshay iyo guud ahaanba shaqooyinkiisu waxa ay ka simmanyihiin geesinimo uu muujiyay oo si ku tala-gal ah uu u rabo in laga dhex fahmo qaraalkiisa. Kulamadaa qaar waxa uu Cawil madaxwayne Siyaad kaga muslaxay rag la haysto, qaar wuxuu ku siiyay talooyin halka qaar kalena uu su’aalo kaga waydiiyay talaabooyin uu madaxwayne Siyaad qaaday iyo sababta ku kalliftay. Bal haddaba aan soo qaadano qaar ka mid ah kullamadaas. Waxa uu yidhi Cawil isaga oo ka hadlaya kulankoodii afraad iyo Su’aalihii uu ka waydiiyay magacaabistii uu madaxwayne Siyaad u magacaabay Cabdiraxmaan Jaamac Barre, madaxwayneha inaadeerkii, in uu noqdo wasiirkii arrimaha dibabadda:
“Waxaan la kulmay Maxamed Siyaad Barre markii uu Cabdiraxmaan Jaamac Barre u magacaabay Wasiirka Arrimaha Dibedda. ….. Waxa aan waydiiyay sababta uu jagadaas ugu magacaabay Cabdiraxmaan Jaamac Barre oo ay ilma’adeer yihiin. Waxa kaloon u sheegay dareenka ay dadku ka qabaan Cabdiraxmaan Jaamac oo ah nin aan lahayn dabeecadii iyo khibraddii laga rabay si uu u guto xilka Wasiir Arrimo Dibadeed. Waxa kale oo uu Cawil inala wadaagay jawaabtii Madaxwaynaha isaga oo hadalkiisa sii watana waxa uu yidhi:
Wuxuu iigu jawaabay “Waa run dareenkaa ay dadwaynuhu ka qabaan. Cabdiraxmaan aniga ayaa koriyay, dabeecaddiisana aad ayaan u aqaan. Waa jacjacoor dabci xun. Sababta ugu weyn ee aan u magacaabay waxa weeyi aabihii Jaamac Barre ayaa abaal igu lahaa”” (Cawil, 2016, p: 146)
Sheekadani waxa ay khilaafsantahay sheeko kale oo uu Cawil ka sheekeeyay iyo waliba sida uu madaxwayne Siyaad ugu jawaabay nin kale oo safiir ah mar uu isla arrintaa Cabdiraxmaan Jaamac Barre wax ka waydiiyay. Waxa uu Cawil ka sheekeeyay in kulankoodii sideedaad oo uu ku weheliyo Gacaliye oo markaa ahaa safiirka Soomaaliya ee Paris uu ku yidhi Madaxwayne Siyaad
“Madaxawene waxa suuqa ku jirta in aad damacsan tahay in aad Cabdiraxmaan Jaamac Barre u magacawdo Wasiirka Arrimaha Dibedda. Cabdiraxmaan shakhsi u qalma maaha in loo magacaabo xil sidaasi u cuslu. Madaxwayne, ha ku ceeboobin”. Madaxweynaha oo wejigiisa cadho ka muuqato ayaa ugu jawaabay “Madaxwayne ayaan ahay, awood ayaan u leeyahay in qofka aan doono aan xil u magacaabo. Waxaan shaqadaada ahayn ha gelin, imikana iga bax” (Cawil, 2016, p: 159).
Ku darso oo waliba sida uu Cawil sheegay, Gacaliye waxa ay isku hayb ahaayeen Madaxwaynaha.Inkasta oo ay run noqon karto, in sida uu Cawil sheegay, talada labada safiir waa Cawil iyo Gacaliyee ee ay ka siiyeen Cabdiraxmaan Jamac Barre uu madaxawayne Siyaad midna ka cadhoodo midna ka garaabo haddana waxa aan meesha laga saari karin in ay sababi jirto.
Waxa kale oo uu Cawil sheegay in uu Siciid Cali Giir ka badbaadiyay mar lagu daray liis kacaan-diid ah. Waxa uu kiiskaa ku waayi lahaa Siciid Cali Giir shaqadiisa isla markaana waxa uu ku gali lahaa xabsi sida uu Axmed Saleebaan Dafle u sheegay Cawil markii uu u dirayay in uu madaxwaynaha u tago si uu ninkaa u badbaadiyo (Cawil, 2061 p: 151). Waxa uu Cawil kaga sheekeeyaya sida uu Siciid Cali Giir u badbaadiyay iyo wixii isaga iyo madaxwayne Siyaad dhexmaray kulankoodii lixaad waxana uu yidhi:
Xukuumaddii labaad ee madaxwayne Cigaal lafteeda wax badan kama uu sheegin qoraagu marka laga reebo dagaalkii sokeeye iyo safaro uu sheegay in isaga (Cawil) iyo niman kale ay u fududeeyeen madaxwayne cigaal in uu ku tago waddamada Kiinya iyo Ugaanda. Halkaa waxa xusid mudan in uu Cawil sheegay hal shay oo uu ku guul-daraystay. Waxa uu Cawil sheegay in uu madaxwayne Cigaal ergo ahaan ugu diray Jaamac Maxamed Qaalib (Jaamac-Yare). Jaamac Maxamed Qaalib waxa uu markaa ka mid ahaa madaxda ciidan-beeleed haystay garoonka diyaaraddaha ee magaalada Hargaysa. Waxa uu Cigaal yiri “waxaan rabaa inuu ii noqdo Wasiirka Arrimaha Gudaha si uu ciidankii boliiska inoogu dhiso” Cawil, 2016, p: 319). Waxa uu Cawil sheegay in uu u tagay Jaamaca oo uu fariintii madaxwayne Cigaal gaadhsiiyay bal se Jaamac aanu ka aqbalin ergadii. Jawaabtii Jaamac waxa ay noqotay sidan“Cigaal in aan la shaqeeyo diyaar uma ahi. Cigaal-na wax aan xabbad ahayn ku tagi maayo. Xabbad ayaa ii qorshaysan inaan ku eryo” (Cawil, 2016 p: 320)
Maadaama uu Cawil ahaa wasiir maaliyadeed shaqadiisa ugu badana ay ahayd cashuur iyo wax la hal-maala, waxa uu Cawil ka sheekeeyay, sheekooyin badan oo soo kala dhex-maray isga iyo ganacsata waawayn ee reer Soomaaliland. Waxa ka mid ahaa sheekooyinkaa, sheeko dhex-martay isaga iyo qaar ka mid ah ganacsatada mar uu mamnuucay in cashuurta jeeg lagu bixiyo sida uu sheegay. Waxa uu yiri“Waxaan amray in aan la aqbalayn jeeg dambe laakiin kastamka la geeyo lacagtii oo kaash ah oo shillinka Soomaaliland ah. Waxaan xasuustaa Jaamac Oomaar oo igu yidhi: “Waxay igu kallifaysaa in aan xaajiyad ku qaado lacagta” iyo Xaaji Baxsane oo igu yidhi: Wasiir, alaab ayaa iga taalla kastamka Saylac. Cashuurta Hargeysa ma ka bixin karaa. Haddii kale waxay noqonaysaa in aan baabuur ku qaado lacagta cashruurta ilaa Saylac” Cawli, isaga oo haddalkiisa sii wata waxa uu yiri: “Waxaan ugu jawaabay “Xaaji, lacagta ku qaad baabuur, waayo amarka aan bixiyay ma beddeli karo” (Cawil, 2016 p: 344).
“Madaxwayne Kenyatta, weligii dayuurad muu raacin. Dayuuradaha wuu ka baqi jirey. Shir dalka dibeddiisa lagu qabtayna, waligii kama uu qayb gelin. Intii uu Madaxwenaha Kenya ahaa, marnaba dalka kama dhoofin, oo dayuurad ma raacin. Dalka gudihiisa baabuur ayuu raaci jirey. Dalalka Afrikada Bari ee Uganda iyo Tanzania; baabuur ayuu u raaci jirey” (Cawil, 2016: P. 423).
Waxa Qoray Maxamed Axmed Askar
September 20, 2016 Wargeyska SaxafiBuug, Cawil Cali Ducaale, Faallo, Falanqayn, Maxamed Axmed Askar, Naqdin, Raad-Raaca Taariikh Soomaaliyeed, Xuseen Cali Ducaale
Previous Previous post: Tobanka Masaajid Ee Ugu Weyn Uguna Quruxda Badan Dunida
Next Next post: Kenya Or Somalia: Who Owns The Sea And What Lies Beneath?